गुगल पिक्सेल The को जादू: राती फोटोहरू बिना रातको फोटोहरू 'रातको साइट' साथ Androidsis
केही घण्टा अघि एक राती फोटो साझा गरिएको थियो जसमा कुनै फ्ल्यास आवश्यक पर्दैन। गुगल पिक्सेल by द्वारा लिइएको दुई फोटोहरू बीचको तुलना 'फ्लाइटलेस मोड' नाइट साइट 'भनिन्छ सफ्टवेयर फोटोग्राफीमा गुगलले अगाडि बढेको ठूलो चरण देखाउँदछ। र यो यो हो कि तपाईलाई यसको लागि केवल एउटा लेन्स चाहिन्छ ... पागल।
गुगलले स्पष्ट गरेको छ कि यसको उद्देश्यहरू तिनीहरूको फोनको सफ्टवेयर सुधार गर्न अधिक खर्च गर्नुहोस् y पृष्ठभूमिमा प्रयोग गरिएको हार्डवेयर छोड्नुहोस्। त्यो हो, जबकि बाँकी निर्माताहरूले मलाई जिद्दी गर्दछन मलाई थाहा छैन कति फोनमा र अधिक जीबीको लेन्सहरू र र्यामहरू छन्, बिग जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता + सफ्टवेयर + हार्डवेयरको योगमा काम गर्दछ। र गुगल पिक्सेल phot फोटोग्राफी परिणाम हो।
1 एउटा फोटो एक हजार मेगापिक्सेलको लायक छ
2 पिक्सेल's को रात दृश्यात्मक पछाडि जादू
एउटा फोटो एक हजार मेगापिक्सेलको लायक छ
त्यो फोटो केहि घण्टा अघि सेबस्टियान डे विल द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो, वा हामी के भन्न सक्छौं यदि यो Google द्वारा गरिएको थियो। यो छ सही फोटो अहिले सम्म भनिएको सबै देखाउन र गुगल प्रतिस्पर्धा भन्दा लगभग हल्का वर्ष अगाडि छ; अब जब हामी देखेका छौं सामसु यसको cameras क्यामेराको साथ नयाँ A9 मा। उहीको लागि जान्छ पिक्सेल of को शानदार समूह सेल्फीहरू.
हामी तुलनाको सामना गर्दैछौं जसमाaनयाँ "रातको दृश्य" मोडको साथ लिइएको तस्बिर पिक्सेल of को र अन्य मोड बिना नै सक्रिय गरियो। भिन्नताहरू तस्विरका लागि दृश्यात्मक देखिन्छ जुन फ्ल्यासको लागि यसको प्रयोग गर्दिन। यसले एल्गोरिदम र सफ्टवेयरको प्रयोग "बौद्धिक" गरी त्यो शानदार फोटो लिनको लागि गर्दछ जुन प्रतिस्पर्धालाई पछाडि छोड्छ; भेट्न नछोड्नुहोस् र तपाईंको मोबाइलमा गुगल क्यामेरा अनुप्रयोगको पोर्ट स्थापना गर्नुहोस्.
यो भन्न सकिन्छ कि यो फोटो कुनै पनि उच्च-एंड फोनले लेन्सको साथ लिन सक्दछ जुन क्षणको उज्यालोपनमा अधिक डाटा प्राप्त गर्दछ, तर पिक्सेल of को जादू भनेको कुनै आवाज छैन। मेरो मतलब, के यसलाई पूर्ण रूपमा कम गरेको छ, जब यो आईएसओ प्यारामिटरहरू उठाउनको लागि लिनुपर्दछ, एकै समयमा आवाजको मात्रा बढाउँदछ। हामीसँग सामाजिक नेटवर्कमा साझेदारी गर्नको लागि धेरै सफा र उत्तम छवि हो।
रातको पछाडि जादू दृष्टि पिक्सेल।
रातको पछाडि जादू बुझ्न दृष्टि हामीले एउटा लेखमा जानु पर्ने हुन्छ अप्रिल २,, २०१ on मा गुगल द्वारा प्रकाशित। एक भनिन्छ «नेक्सस र पिक्सेलको साथ प्रयोगात्मक रात फोटोग्राफी। यसले एउटा फोटो उद्धृत गर्दछ जुन सान फ्रान्सिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिकाको गोल्डन गेटको रातको आकाशको DSLR सँग लिइएको थियो।
यहाँ तपाईं तिनीहरूका वास्तविक आकारमा फोटोहरू देख्न सक्नुहुनेछ:
यसलाई Google रिसर्च टोलीमा लगेर, जुन ह्यान्डल गर्दछ कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी र एल्गोरिदम विकास मोबाइल उपकरणहरूमा तस्विर लिन "मद्दत" गर्न, एक सदस्यले फ्लोरियन काइन्जलाई Google सफ्टवेयर इञ्जिनियरलाई फेरि लिनको लागि प्रोत्साहित गर्‍यो, तर यस पटक मोबाइल क्यामेराको साथ।
यस लेखमा उनले अनुसन्धान प्रक्रियाको अंश recounts, आधार बाट शुरू: छवि प्रसंस्करण को प्रवाह जुन HDR + मोड सक्रिय गर्न सक्षम छ। Nexus र पिक्सेल क्यामेरा अनुप्रयोगमा यो HDR + मोड कम प्रकाश स्तरमा फोटोहरू लिन अनुमति दिन्छ चाँडै बिभिन्न एक्सपोजरमा १० शटहरूको श्रृंखला शूट गर्दै। एक परिणाम परिणामको रूपमा लिइएको छ। जे होस् यस कार्यप्रवाहमा त्यहाँ सीमितताहरू छन् HDR + के।
र यहाँ परिणाम एक पोस्टरियोरी विभिन्न प्रयोगहरूको साथ। दायाँमा अन्तिम फोटोले प्राप्त गरेको ठूलो परिणाम देखाउँदछ:
केयन्सको लेखमा केहि छविहरूमा देखाए जस्तै कम प्रकाशको फोटोग्राफीमा उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न प्रयोगहरू अगाडि बढाइयो। अन्तमा, Kainz बताउन सक्षम थियो कि रातको फोटो लिन फोन क्यामेरा; सँधै मोबाइलमा उपयुक्त सफ्टवेयरको साथ जुन हातले मास्कहरूको तहहरू "चित्रकारी" जस्ता चरणहरू हटाउन सक्षम थियो।
त्यो हार्डवेयर जुन हामीसँग आज छ ती सबै कार्यप्रवाहमा प्रशोधन गर्न सक्षम छ पिक्सेल's को रात दृश्य मोडको साथ फोटो लिनुहोस्, तुलनामा देखाईएको जस्तो जुन फ्ल्यास प्रयोग गरीएको छैन र यो तथ्यलाई सायद थाहा छैन। जो कोही सिकाईएको थियो र भनियो कि कुनै फ्ल्यास प्रयोग मात्र गरिएको थिएन हामी विश्वास गर्दैनौं। यहाँ वास्तवमा गुगलले फोटोग्राफीमा लिएको विशाल कदम हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » गुगल पिक्सेल of को 'नाईट साइट' मोडको साथ फ्ल्यास बिना रातको फोटोहरू लिने जादू